Abakhiqizi be-photoluminescent master batch - China Photoluminescent master batch Suppliers & Factory
I-Luminescent plics master batch. I-Luminescent plics master batch luhlobo lwe-pellet yamapulasitiki enezimpawu zokuzikhazimula. Ngomjovo, i-extrusion kanye ne-blowing blowing, ungasebenzisa ngqo ama-pellets epulasitiki we-Photoluminescent ukwenza imikhiqizo ekhanyayo yepulasitiki.
I-Photoluminescent master batch -I-granule granule eluhlaza esetshenzisiwe ye-Glow ku-masterbatch emnyama Sizosebenzisa ukugqama okuhle kwe-powder ekhanyayo ukuze ukhiqize i-masterbatch ekhanyayo, ukukhanya okuhle. Sizokwakha ukuxhumana okuhle nawe, ngemikhiqizo yakho nemishini yakho eyakheka kahle kwi-masterbatch yakho. Senza umsebenzi omuhle wenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa, ngemisebenzi yakho yokukhiqiza ukunikela ngezeluleko ezimfushane nangesikhathi esifanele. 1. Isikhathi sokukhanya esifushane: 10-16 m ...
Kungani Khetha Ukukhanya ku-masterbatch esikhundleni se-powder ekhanyayo?
Amandla adonsela phansi we-luminous powder aphakeme kakhulu, azokuma uma exuba ne-resin ngqo.
Kungaba lula ukuxabana ngesikhathi senqubo yokujova ukuze wenze umkhiqizo ube mnyama.
Ama-Masterbatch anokuhambisana okungcono ngenxa yokuphatha okufanayo kwe-masterbatch ekhanyayo ekhethekile nomkhiqizo weplasctic.
Kukhanya ku-masterbatch emnyama ube nokuhlakazeka okungcono namandla okufaka imibala.
I-Luminous powder inamanzi amaningi, kanti i-masterbatch inganciphisa ngempumelelo.
Kulula ukubala isilinganiso somthamo, i-masterbatch iyi-granule ukubukeka i-wihich kuyafana ne-resin ukuze ikwazi ukuthembisa ukunemba okuyisisindo.
7) Ubungani bemvelo, ukusebenzisa i-masterbatch kungakugwema ukungcola kothuli, okuhle empilweni yabasebenza.
Ama-pellets ethu epulasitiki we-photoluminescent ikakhulukazi ama-resins athile afana ne-PP, i-PE, i-ABS, i-PC, i-PVC njll. Amaphesenti ethu ajwayelekile we-pigoluminescent pigment kuma-pellets epulasitiki we-photoluminescent asuka ku-20% kuya ku-50%. Ukukhanya nesikhathi sasemuva semikhiqizo yakho eseqediwe kungalungiswa nguwe ngokwengeza ama-resins amaningi kumakhompiyutha.